वर्णन मिडिया किन युरोपियन, रसियन र क्यानडीयन नेपालमा दाँतको उपचार गर्न आइरहेकाछन् ? - वर्णन मिडिया
‘नेपालमा आउने अधिकांश विकसित मुलुकका पर्यटक र एनआरएनहरु नोपलमा दाँतको उपचार गर्न आउँदछन् । उनीहरुको देशमा दाँत उपचार गर्दा लाग्ने खर्च बोकेर नेपाल आउने हो भने सगरमाथाको देश घुम्न पनि पाइन्छ र राम्रोसंग दन्त उपचार गरेर जान पनि पाइन्छ । त्यसैले अहिले नेपाल आउने अधिकांश पर्यटक नेपालमा दाँतकै उपचारका लागि आउदछन् । यो कुरा वर्णन मिडियालाई हिमाल डेन्टल हस्पिटल धुम्वाराहीका अध्यक्ष राजेन्द्र भट्टले बताउनु भएको हो ।
वर्णन मिडियाः के नेपालको डेन्टल सेवालाई विदेशीले पत्याउँदछन् ?
राजेन्द्र भट्टः नेपालमा डेन्टल केयरको क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । त्यसैले विश्वको जो कोहीले नेपालमा सहजै दाँतको उपचार गर्ने गरी पुर्वाधार विकास भएको छ । यहाँ दाँतको उपचार सम्वन्धी सम्पुर्ण उपचारका साधनहरु ल्याइएको हुनाले अहिले नेपालको दन्त उपचार सेवामा धेरै प्रगति भै रहेको छ । यहि कारणले गर्दा हजारौ विदेशीहरु नेपालमा उपचार गर्न आउँदछन् र तिनै नेपाल घुम्ने हुनाले हिमाल डेन्टल हस्पिटलले पनि नेपालमा व्यापक पर्यटक ल्याउन पनि सहयोग गरेको छ ।
वर्णन मिडियाः के यो अस्पतालमा पढाउने काम पनि गरिन्छ ?
राजेन्द्र भट्टः हो हिमाल डेन्टलमा दाँतसम्वन्धी प्रमाणपत्र तहको सिडिएस पढाइन्छ । त्यसैगरी डेन्टल टेक्नीसियन र डेन्टल नर्स सम्वन्धी पढाइ पनि गरिन्छ । अब एस ई ई गरेका जेहेन्दार विद्यार्थीले यहि श्रावण महिनामा फारम भरेर एउटा परीक्षा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीले यहाँ सिडिएस पढ्न पाउँदछ । पढाइ सकिना साथ रोजगारीको व्यवस्था हुने भएकोले यसमा पनि विद्यार्थीको चाप बढी रहेको छ । त्यसैले अब एसईई गरेका विद्यार्थीले सिडिएसमा भर्नागरेर आफ्नो भविश्य प्रविधीमा लगाउन सक्दछन् ।
वर्णन मिडियाः नेपालमा दाँतको उपचार नेपालीका लागि महंगो छ भन्ने सुनिन्छ नी ?
राजेन्द्र भट्टः यो पनि होइन जुन चिजको कच्चा पर्दाथ नेपाल वा भारतमा पाइन्छ त्यसको उपचार सस्तो हुन्छ र जस्तै पाँचसय देखि एक हजार सम्ममा पनि दाँत फेर्न सकिन्छ । जुन दाँतको कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनु पर्दछ । त्यसको उपचार निश्चितरुपमा महंगो हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कुनै सामान १ लाख मुल्य तिरेर ल्याएपछि एक बिस , एक पच्चिसमा नबेच्ने हो भने त व्याज पनि उठ्दैन । त्यसैले हामीले नाफा गर्नका लागि महंगो गरेको होइन कच्चा पदार्थ नै महंगो हुन्छ ।
वर्णन मिडियाः तपाँईको अस्पतालले दन्त प्यासेन्टलाई कस्ता सेवा दिन सक्छ ?
राजेन्द्र भट्टः पहिलो त ओरल मेडिसिन अन्तर्गत दन्त परीक्षण, परामर्श रोग पहिचान २४ घण्टे सेवा दिन्छ त्यसैगरी म्यासियोफेसियल सर्जरी, विभिन्न प्रकारका कृतिम दाँतहरु राखने काम, आधुनिक प्रविधिबाट दाँतको सल्यक्रिया, दाँतरोप्ने – इमप्लान्ट) मिलिंग, सिबिसिटी एक्सरे, लेजर मेशिन र एम्वुलेन्स सेवा पनि उपलब्घ गराइएको छ ।
वर्णन मिडियाः यहाँ कुन देशका मानिस उपचारका लागि किन आउने गरेका छन् ?
राजेन्द्र भट्टः बढीमात्रामा रसिया , युरोपियन युनियन र क्यानडाका ब्यक्तिहरु आउने गरेकाछन् । किनकी विदेशमा दन्त उपचार ज्यादै नै महंगो छ तर त्यहाँ गर्ने खर्चले नेपालमा धेरै मनोरञ्जन समेत गर्न सकिने हुनाले उनीहरु यहाँ आउने गर्दछन् ।